व्हिस्कीको आमा---ओक ब्यारेल-उद्योग समाचार-गोआलोङ लिकर (समूह)
व्हिस्कीको आमा ----ओक ब्यारेल
आसवन पछि, व्हिस्की पनि ब्यारेल मा परिपक्व हुनु आवश्यक छ। काठको ब्यारेल आमाको भूमिका जस्तै छ। यसले व्हिस्कीको संरक्षण र खेती मात्र गर्दैन, तर यसलाई समृद्ध सुगन्ध र रंग पनि दिन्छ। व्हिस्कीको फरक ब्यारेल प्रकारको रूपमा फरक गन्ध हुनेछ। एकै समयमा, व्हिस्कीको रङले ब्यारेलको प्रकार र परिपक्वता समय अनुसार विभिन्न शेडहरू पनि देखाउनेछ।
ओक ब्यारेल बनाउनको लागि सबैभन्दा सामान्य कच्चा माल हो, तिनीहरूको ठूलो मात्रा र सजिलो पहुँचको कारणले मात्र होइन, तर काठको विशेषताहरूले व्हिस्की परिपक्वताको आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्दछ। निम्न तीन थप सामान्य ओक सामग्रीहरू छन्:
1. अमेरिकी सेतो ओक, 90% व्हिस्की उद्योग आज अमेरिकी सेतो ओक प्रयोग गर्दै छन्।
2. युरोपेली ओक, जसमा घना बनावट छ, व्हिस्कीलाई थप सुगन्ध अवशोषित गर्न अनुमति दिन्छ। युरोपेली ओक ब्यारेलहरू सामान्यतया पहिले शेरीले भरिन्छन्, र त्यसपछि व्हिस्की परिपक्वताको लागि प्रयोग गरिन्छ।
3. Mizuna (जापानी ओक), प्रायः जापानीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। यो ओकमा गहिरो बनावट र धेरै शून्यता संग धेरै vanillin समावेश छ। त्यसैले यो ब्यारेल चुहावट वा क्षतिको लागि बढी प्रवण छ।
काठको ब्यारेलले व्हिस्कीलाई रंग दिन मद्दत गर्छ
परिपक्वताको पहिलो केही वर्षहरूमा, ब्यारेलले व्हिस्कीलाई यसको रंग दिनेछ। सुरुमा ब्यारेलमा भरिएको रक्सीको शरीर पारदर्शी र रंगहीन हुन्छ। ब्यारेलबाट रक्सी बाहिर निस्किएपछि यो सुन्दर रंगले दाग हुनेछ। हल्का सुनदेखि गाढा खैरो सम्मको रंग।
विभिन्न काठले व्हिस्कीलाई विभिन्न सुगन्ध दिन्छ
काठको ब्यारेलले व्हिस्कीको अन्तिम सुगन्धमा निर्णायक प्रभाव पार्छ। कतिपय मानिसहरूले व्हिस्कीको सुगन्धको ९०% परिपक्वतामा प्रयोग हुने ब्यारेलमा निर्भर हुन्छ भन्ने पनि सोच्छन्।
व्हिस्कीको सुगन्ध पाउनको लागि, डिस्टिल्ड रक्सीको शरीरले काठमा भएका विभिन्न अणुहरू (जस्तै लिग्निन, ट्यानिन्स, ल्याक्टोन्स, ग्लिसरिन, फ्याटी एसिड, आदि) सँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ। लिग्निनले जैविक यौगिक भ्यानिलिन उत्पादन गर्न पहिलो रासायनिक प्रतिक्रियाहरू प्रारम्भ गर्नेछ, जसलाई व्हिस्की पनि बोर्बोन व्हिस्की पनि भनिन्छ। वर्षाको मौसममा छोटो हुने व्हिस्कीमा सामान्यतया भेनिलाको गन्ध हुन्छ। जे होस्, लेक्टोन व्हिस्की रक्सीको शरीरमा प्रवेश गर्न लामो समय लाग्छ, र व्हिस्कीलाई मनमोहक नरिवलको सुगन्ध निकाल्न करिब २० वर्ष लाग्छ।
अघिल्लो: व्हिस्की "स्लैंग" दोस्रो गोली
अर्को: व्हिस्की बारे "अफवाहहरू"।